Chifambiso chekufambisa ndege kuSasel
Chifambiso chekufambisa ndege Zurich
Basa remotokari WEF Davos
Basa rekufambisa kune rimwe kirasi, rakasvibiswa uye rakasununguka kubva paA kusvika B. Pasinei nendege yekuendeswa neTekisi Basel Airport kana kuti limousine kushanda muBasel, tinoita mabasa edu akavimbika uye asingadhuri.
Taura nesu nenzira yedu yekumbira kana kutifonera isu 41 78 861 35 50.
Der Fahrdienst Basel kuitira kuchengetedzwa zvakanaka kwemakousine basa reBasel neZurich, ndege yekuendesa ndege nebhasikisi yebhasikisi yebhasi yeBasel. Nezviitiko, fairs (Art Basel, Baselworld), Misangano (WEF Davos,), zviitiko zvakakosha, maitiro ega ega kana ebhizimisi. Iwe unobva mangwanani? Unosvika nenguva dzasikati here kana kuti unotakura mitoro yakawanda? Zvino iwe unesu, the Chifambiso chekufambisa ndege Zurich uye Basel zvakanaka chaizvo, isu Taxi Basel Airport inogara ichienda. yedu Basel Airport Transfer Zvimotokari zvinogona kugadzirisa kusvika kuvanhu vane 7 nemutoro wako wose. Batsirwa nebasa redu risina mari uye rakasununguka.
CALATE RIDE PRICE
Nhandare dzedu: Airport motokari neTekisi Basel Airport,Limousine basa
Limousine Service & Taxi Basel Airport - Nesu iwe unotyaira zvakanakisisa!
Kugamuchirwa kushandiswa kwedu kushandiswa muBasel! Uri kushanyira guta racho, kupfuura nepakati kana kutsvaga kutamira kune imwechete Limousine Service Basel kana kutengesa taxi Basel Airport? Nokuda kweizvi zvose nezvimwe zvakawanda, vatiniti vedu vane ushamwari, vakadzidziswa, uye a exclusive fleet inowanikwa. Isu tiri chauffeur iwe mukati memuguta, somuenzaniso padivi rekufambisa ndege kuBasel Baselworld the Art Basel. Isu tinowanikwa kune vatengi vemabhizimisi uyewo vanhu vega. Mukuwedzera, iwe unogona kutora basa redu limousine muBasel uye nenharaunda yakapoteredza, asiwo kuenda kune mamwe maguta semu Davos World Economic Forum uye yedu Basa remotokari WEF Davos, Taura nesu ikozvino uye tive wakachengeteka iwe pachako limousine muBasel neZurich!
Limousine Service Basel - Kubva Basel kusvika Zurich Airport
muBasel Gore roga roga mamiriyoni evashanyi anobva kuSwitzerland, Germany kana Gulf States. Havasi kungoverenga chete mamiriyoni ega ega husiku husiku huri muguta, ivo vanodawo kufamba. Kubvira paA kuenda kuB, somuenzaniso, kubva kuBasel kusvika kuZurich Airport mune rechitatu guta guru muSwitzerland, ndizvo zvinonzi Taxi Basel Airport. Imotokari inobva kuhotera kusvika kune imwe nzvimbo iri muguta kana kutamira kune rimwe guta. Kana zvimwe nyika yakasiyana! Kunyatsonaka izvi ndezvezviitiko izvo vashanyi vakawanda vanoenda kuguta redu vanonyora basa redu limousine muBasel. Kunyanya vashanyi uye vanofamba nebhizimisi vanoshandisa ndege yedu yekufambisa ndege kuBasel kana kutora basa redu limousine panguva yavo yekugara muBasel. Asi zvakare, kana iwe uchida rwendo rusingakanganwiki, somuenzaniso sechikamu chezuva rekuberekwa kana yemuchato, famba zvakanaka nemakousine edu muBasel! Uye isu pa-transferservice-basel.ch tinoshanduka uye tinopa basa remotokari pasina mitsara. Kana iwe uchida kutitendera kukuendesa kune dzimwe cantons kana nyika, iyo haisi dambudziko kwatiri!
Iyi ndiyo nguva yakakodzera yekusimudzira rushine / upscale taxi Basel Airport
Zvisinei, isu tirambe pakutanga muna mitemo guta muBasel, uye pashure zvose, zvirokwazvo imwe nzvimbo 23 mativi makiromita: Vachifunga yamuchazogara muBasel kana kupedza imwe nguva pano, pane zvakasiyana-siyana zviitiko kuti Réservation redu Limousine basa muBasel. Basel ndiro guta rechitatu guru kuSwitzerland uye rakadaro rine zvakawanda zvokupa vanhu vazhinji. Izvi zvinokanganisa vose vagari, pamwe chete nevashanyi. Kana iwe ukashanyira guta racho, ngazvive zvikonzero zvebhizimisi kana pachevhesi, unogona kushandisa Taxi Basel Airport Service sechikamu chekupedzisira murufambi kuenda kuguta redu rakanaka. Pamusoro pezvose, vezvematongerwe enyika, vanozivikanwa kana vebhizimisi vanobva kune dzimwe nyika vanoda kubvarura chimousine nesu, nokuti vanokoshesa kungwara uye basa rinoga. Saka pane Somuenzaniso, vashumiri, vokubhengi, mukuru mamaneja kana vamiriri uyo mupfuri URA nesu muBasel uye kurishandisa somunhu oga Airport Taxi. MuBasel muchagarawo pazvigaro kuzivikanwa makambani, akadai Novartis, Roche uye Swiss International Airlines, izvo, pakati vamwe vazhinji, anogara inoshanyirwa mukuru-pamwero mabhizimisi kushanya kuna muBasel. Unoda here kubhadhara chimousine muBasel nokuda kwechiitiko chebhizimisi kana kutarisa kwekuona muBasel? Kuti uite rwendo rwebhizimisi, unogona kubvarura imodoka chaiyo kubva kwatiri panguva yakakodzera panzvimbo yakakodzera! Izvi ndezvechokwadiwo kuti private nzendo, uyewo oga vanhu ndiro muBasel kuti siyana nezvikonzero nguva dzose inokosha kushanya (uye kana iwe bhuku kusvika kubva Zurich redu Airport kuchinjwa Zurich). Heino izvozvi Symphonyizvo Art Museum Basel, the Messe Basel kana, kubva kuCartoms, the Basler Fasnacht uye nezvimwe zvakawanda kuti uwane. Mukuwedzera kune izvi zvinotarisa zvinotarisa, kunewo zvakare hukuru muhupenyu hwokuti iyo teks upscale muBasel inomirira pfungwa yakanakisisa. Semuenzaniso, basa redu re limousine rinowanikwawo pakuroora, mazuva ekuzvarwa kana mhemberero. Kukunda neLimousine Service Service yeBasel, muchimiro.
Limousines Service Basel - Motokari dzedu muCanton capital
Sei uchida kurongedza mutsigiri weTekisi Basel? Nekuda kwekuti iwe unoda kuenda kune imwe chete kana kuguta kweguta kuburikidza neBasel, mumatunhu akakwirira, nevatyairi vakananga? Izvi ndizvo chaizvo zvakaita VIP Shuttle Basel yedu, iyo yatinopikira kuburikidza nemotokari iri mubasa redu rekusimudzira. Basa redu-yeklasi yakavakirwa kune imwe nzvimbo yakawanda pakirasi yepamusoro yevanotengesa motokari zvakanakisisa. Kuti tive nechokwadi rwendo rwakachengeteka uye rwakanaka, tinovimba nemhando yemotokari yakagadzirwa muGermany: Isu semugove wako wekusimudzira muBasel, haugoni kusvika panzvimbo yako. Tinoda kuti iwe unzwe wakasununguka muguta redu, kwose kwaungaenda. Iyi ndiyo nzira yakanaka yekuzviparadzanisa isu kubva kumatekisi, nokuti hatisi kukusimudzirai chete, isu tiri basa re limousine. Saizvozvowo, tinoshanda nepamusoro-yakachengetedzwa, yakasimba uye motokari yemotokari:
• Mercedes E kirasi
• Mercedes E ekiteshi chezvitoro
• Mercedes Viano (zvigaro zve8)
• VW Passat pfuma
Iko motokari mubasa redu rekummousine yakakodzera zvose pakuendeswa kwevanhu, zvakadai sekuvhara ndege yepamusoro kana kuti kufamba neboka guru. Pamusoro pezvido zvose tine motokari yakanakisisa "pakutanga". Tinotora vatengi vedu kwose kwose uye tinovatora kose-kose, iyo ndiyo imwe yemapupa pa transferservice-basel.ch.
Taxi Basel Airport Transfer - Kwete kubva kuBasel kusvika Zurich Airport
Hazvirevi nguva dzose kuva "yakarurama" tekesi Basel Airport - kuvhara kweVIP yedu kuchakutora iwe kwose kwaunoda. Fungidzira kwete kungoshanyira Basel, asi Switzerland yose. Unoda here kuenda kuZurich hofisi yepamhepo neyo ndege yako kutamira kuBasel kana kuti iwe unoputirwa muBern? Zvechokwadi, isu tinopa zvakare iyi basa remotokari mumotokari yedu chete. Asi kwete izvozvo chete, chokwadi, basa redu remousine rinoshanda munyika yose, iwe unofarira kuenda ku70km chete kubva kure Freiburg muGermany, kuStuttgart kana Munich. Uyewo Liechtenstein, France, Italy kana France ndiyo inogona kuitika kune iwe unogona kuronga neyemhirizhonga yedu yepasi rose.
Mumakumbo edu oga hamungasviki chero chinhu, kana kunyaradza kana kuchengeteka. Apropos: Dzose dzedu dzose hadzizivikanwi chete neuchenjeri hwavo, asiwo nekunzwisisa kwavo kutyaira. Zvechokwadi izvi hazvirevi kuti iwe haugoni kuita zvirongwa zvako panguva. Vatyairi vedu vanoziva nemitemo yemigwagwa mune zvose mumaguta uye marefu-kure nemugwagwa munyika dzakasiyana siyana uye ichakutora iwe sechinguva sekuchengeteka kune iwe unoda kuenda.
Taxi yako Basel Airport Team
Copyright © 2018 , Yakapiwa WordPress, Musoro: Wakawanda ThemeGrill.